Amacala Amakhasimende - UJesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Amathente wokukhangisa aprintiwe ngokwezifiso kanye nesembozo setafula le logo asiza ekwakheni idokodo elihle lokunikeza iziphuzo ezithile namasampula womkhiqizo wamahhala kubantu abadlulayo.
Uma uhlela ukubamba umbukiso omncane ongaphandle kwesitolo sakho, uzodinga ithuluzi elilula kodwa eliphumelelayo lokwenza likhetheke. Itende le-logo eliphrintiwe ngokwezifiso libonakala liyindlela engcono kakhulu ngoba alikwazi ukuhlinzeka kuphela ngendawo yokuhlala kodwa futhi nendawo ethokomele. Futhi, njengoba imvamisa sinamasampula womkhiqizo othile adinga ukuboniswa.
Bheka Lo Mkhiqizo
Noma kunini lapho ufuna ukuletha imininingwane ethile yokumaketha endaweni evulekile, amafulegi ezimpaphe enziwe ngokwezifiso azokumangaza ngomphumela omuhle wokubonisa.
Noma kunini lapho ufuna ukwenza umkhankaso wokumaketha, unezinto ezimbalwa okufanele uzicabangele, njengokuthi izethameli zakho zingobani nokuthi ungayisebenzisa kanjani kahle indawo yokubonisa. Amapaki noma i-greenbelt ethile ngamapharadesi abathandi bokuzivocavoca nezindawo ezinhle zokuthi abantu bathathe uhambo.
Ukuphrinta igama leklabhu yakho newebhusayithi yakho etendeni lombhede kuyinto epholile. Itende alikwazi ukunikela ngendawo yokukhosela kuphela kodwa futhi liphilisa lesi simo.
Ingabe unayo ukuqeqeshwa kweklabhu ejwayelekile noma imeshi yangaphandle? Ngabe ulwela ukuthola indawo yokuphumula noma indawo yokugcina izinto zamalungu eqembu? Ngetende langaphandle lombhede, zonke izinkinga zakho zingaxazululwa. Omunye ucabanga ukuthi itende elingenalutho lizosebenzela lo mcimbi